Maxaad ka taqaanaa laacibka ugu TAAJIRSAN kubbada cagta Adduunka…(Qiso aad kaaga YAABIN doonta) – Gool FM
Maxaad ka taqaanaa laacibka ugu TAAJIRSAN kubbada cagta Adduunka…(Qiso aad kaaga YAABIN doonta)
(World) 07 Jan 2018. Markaad ka fikirto laacibka ugu TAAJIRSAN kubbada adduunka waxaa durba kugu soo dhacaya sida Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar, balse sidaas maaha sheekadu oo xiddiga ugu hodansan waa 19-jir ka tirsan kooxda keydleyda ee Leicester City.
Bal la kulan Faiq Bolkiah, wiilka uu Adeerka u yahay Suldaanka Brunei (Hassanal Bolkiah) kaa oo qiimihiisa lagu qiyaasay adduun dhan 20 Bilyan oo Doolar, yay kaa hoos bixin sheekadu waa ka gudubtay Milyan oo Bilyan ayay joogtaa.
Xiddiga garabka kaga ciyaara Foxes ayaa waqti ka ciyaarayay carada Ingiriiska, isagoo waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay AFC Newbury.
2009-kii, Southampton ayaa Faiq Bolkiah ku soo dartay Akaadamiyadeeda inkastoo aysan heshiis u gacan galin, Arsenal ayaa iyana 2013 u soo bandhigtay Tijaabo.
Bolkiah ayaa 2013-dii Gunners kula tartamay Lion City Cup, xitaa Gool ayuu ka dhaliyay tartankan.
Kaddib markii xaaladiisa laga warhelay, Chelsea ayaa xiddiga garabka ka duula u bandhigtay heshiis labo sano ah oo uu isla markiiba qallinka ku duugay.
Inkastuu ku dhashay Los Angeles, ee cariga Mareykanka, Bolkiah ayaa doortay inuu u ciyaaro dalkiisa Brunei wuxuuna xulkiisa matalay sagaal kulan isagoona hal gool u dhaliyay.
Si Fikrad aan kaaga siiyo Hantida Bolkiah waxaad u baahan tahay inaad fiiriso aabihii Fejri.
Ninka la dhashay Suldaanka dalka Brunei ayaa la warinayaa in 15-sano gudahood uu ku qarash gareeyay adduun dhan 15- Bilyan oo bound markaa uu ahaa madaxa wakaalada Maal-galinta Brunei
Duqa dhalay wiilka garabka kaga ciyaara Leicester City ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inuu leeyahay 2,300 oo Baabuuro oo ay ka mid yihiin kuwa ugu qaalisan adduunka sida Bentleys, Ferraris iyo Rolls-Royces.
Kaaga sii daranee garoon dhan ayuu u dhisay si dhacdadaasi loogu qabto, wuxuuna boqorkii Pop-ka ee Michael Jackson u gacan galiyay 12.5-milyan.
“Waalidiinteeda markasta way i taageeri jireen iyagoo iga caawinaya inaan gaaro riyooyinkeyga inaan noqdo laacib kubbada cagta ah.
“Caruurnimadeydii si adag ayay ii tababareen nafsad ahaan iyo jir ahaanba, sidaa darteed waa inaan iraahdo waalidiinteeda ayaa ah kuwaan ku dayado.”.
Messi oo markale Shabaqa tagay iyo Barcelona oo weli la joojin la'yahay...+SAWIRRO
Inter Milan oo hanatay Supercoppa-ha da'yarta + Sawirro